Izindaba - Qonda Ukuhlelwa Kokuhlaziywa Kokukhanya Kwe-Photometric
Qonda Ukuhlelwa Kokuhlaziywa Kokukhanya Kwe-Photometric
Uma usembonini yokukhanyisa ukwakheka komhlaba njengomkhiqizi, umklami wezibani, umsabalalisi, noma isichazi sezakhiwo, uzodinga ukubhekisa amafayili wohlelo lwe-IES photometric ukuze uqonde ukukhishwa kwangempela kwamandla okukhanya nokukhanya kwamalinki ofisa ukuwafaka imiklamo. Kithina sonke embonini yokukhanyisa ngaphandle, le ndatshana ilapha ukusisiza ukuthi siqonde kangcono ukuthi singafunda futhi sihlaziye kanjani imidwebo yokukhanyisa i-photometric.
Njengoba kushiwo yiWikipedia ngamagama alula njengokubhekisa kokuqonda kokukhanya; I-Photometry Isayensi yesilinganiso sokukhanya. Umbiko wokuhlaziywa kwe-photometric uyisigxivizo seminwe sendlela ukukhanya kwe-luminaire okuletha ngayo ukukhanya kwayo kulowo mklamo oyingqayizivele womkhiqizo. Ukuze ulinganise wonke ama-engeli okukhipha okukhanya nokuthi ngawuphi umfutho (obizwa nangokuthi i-candela noma amandla ayo ekhandlela), uqaphele ukuhlaziywa kwesibani esikhanyisa ukukhanya, sisebenzisa into ebizwa ngokuthi Isibuko seGoniometer ukusisiza sikhombe lezi zici ezahlukahlukene zokukhishwa kokukhanya ngamandla nebanga elihlobene namaphethini alo. Le nsimbi ithatha ukukhanya okulula (i-candela) futhi iyikala ngezindlela ezihlukile. Ibanga ukusuka kusibani ukuya eGoniometer kufanele libe ngamamitha angama-25 noma okungcono ukuthola isilinganiso esifanele se-candela (umfutho). Ukuze ukuhlaziywa kwe-IES photometric kusebenze kahle, siqala ngokulinganisa amakhandlela noma amandla ekhandlela ngamadigri ayi-0 (iqanda lingaphansi kwesibani noma phansi). Ngemuva kwalokho sihambisa i-goniometer ama-degree ama-5 bese siqhubeka nokuyihambisa kaninginingi, amanye ama-degree ama-5 ngaphezulu isikhathi ngasinye lapho sizungeza khona isibani ukuze sifunde kahle ukukhanya okukhiphayo.
INDLELA YOKUQONDA INQUBO YOKUKHANYA KOKUKHANYA KOKUKHANYA KWEZITHOMBE
Ngesinye isikhathi, sesihambe ibanga elizungeze ama-degree angama-360, sihambisa i-goniometer bese siqala nge-engela engama-degree angama-45 ukusuka lapho siqale khona futhi saphinda inqubo. Ngokuya ngesibani sokukhanya komhlaba, singakwenza lokhu ezinhlangothini ezahlukahlukene ukubamba kahle imiphumela yangempela ye-lumen. Ishadi lika-candela, noma ijika lamandla ekhandlela, lenziwa ngalolo lwazi futhi lisetshenziselwe ukudala la mafayili e-IES Photometric esiwasebenzisa embonini yokukhanyisa. Ekukhanyeni ngakunye okuhlukile kokukhanya, sizobona ubukhulu obuhlukile besibani esivame ukuhlukile kubakhiqizi bokukhanyisa. Imodeli yokusabalalisa elula yabe seyakhiwa, ebizwa nangokuthi ijika lamandla ekhandlela, nalo elihlinzeka abaklami bezibani kanye nabakhi bezakhiwo ngokubonisa okubonakalayo kokukhanya okusatshalaliswa yisikhanyisi ngokusebenzisa ukukhanya kwaso, izindwangu, nomumo.
Kude lapho sithola khona kusukela ku-zero point yokukala, lapho ukukhanya kukhanya kakhulu. Ithebula lokusatshalaliswa kwe-candela yijika le-candela kepha lifakwa kwifomu le-tabular.
Imidwebo yokukhanya ye-photometric edalwe kusuka kulokhu okutholakele ikutshela ngokushesha uma iningi lokuhamba (amalambu, "ukuhamba kokukhanya") kuye phezulu kuya phansi noma eceleni.
Ithebula lokusetshenziswa kokulingana ku-photometry licubungula iphesenti lokukhanya okuvela kumalambu afinyelela ebusweni bomsebenzi esikhaleni esinikeziwe. Isilinganiso segumbi lamakamelo isilinganiso sezindonga ezindaweni eziqondile noma phansi endaweni yokusebenza. Izindonga zimunca ukukhanya okuningi. Lapho zimunca kakhulu, ukukhanya okuncane kufinyelela ezindaweni lapho ukukhanya kukhanyiselwa khona. Futhi sinamanani wokubonisa kulawa mashadi abheka amaphesenti wokukhombisa kusuka phansi, izindonga, nasesilingini. Uma izindonga zingokhuni olumnyama olungakhombisi ukukhanya kahle, lokho kuyosho ukuthi ukukhanya okuncane kukhonjiswa endaweni yethu yokusebenza.
Ukuqonda ukuthi konke lokhu kukhishwa kokukhanya kusebenza kanjani kumkhiqizo ngamunye, kuvumela umklami wezibani ukuthi ahlele ngokunembile ukuphakama okufanele abeke khona isibani nebanga phakathi kwamalambu ukukhanyisa kahle izikhala ezingaphandle zokugcwalisa leso sikhala ngokukhanya okulinganiswe kahle. Ngalo lonke lolu lwazi, ukuhlela nokuhlaziywa kwe-photometric kuzokuvumela (noma isoftware) ukuthi ukhethe kalula inani elifanele lamalambu adingekayo kuhlelo lwephrojekthi yokwakha izibani enenzuzo enkulu ngokufaka amandla afanelekile wokukhipha amanzi namazinga wokukhishwa kwe-lumen ukudala lokho kufakwa kokukhanya okuhle kakhulu kusetshenziswa imininingwane ekhombisa ama-engeli wokukhanya okuzokhonjiswa ukukhanya ngakunye kumapulani ezakhiwo zalapho. Lezi zindlela zokunquma amadizayini amahle wokukhanyisa ukwakheka komhlaba nezinhlelo zokufaka, vumela ochwepheshe kanye nabaphathi abakhulu bokuthenga iphrojekthi yokwakha ukuthi balawule kahle futhi baqonde ukuthi imaphi amalambu afanele ukufakwa endaweni enikezwe kuhlelo lwempahla oluvela kubakhi, ngokususelwa ekukhanyeni ijika nedatha yokukhipha ye-lumens.
INDUSTRY PHOTOMETRIC UHLELO LOKUKHANYA IES DIAGRAM CHART TERMS
Amalambu: Ukukhanya okukhanyayo, okulinganiswa ngamalambu (lm), inani eliphelele lokukhanya okukhiqizwa ngumthombo ngaphandle kokubheka ukuqondiswa. Ukukhanya okukhanyayo kunikezwa abakhiqizi besibani namanani avamile we-lumen afakiwe kumatrix wesibani.
UCandela: Iyakhanya umfutho obizwa nangokuthi Ukukhanya, kulinganiswa ku-candela (cd), inani lokukhanya elikhiqizwe ngendlela ethile. Ngokomdwebo, lolu lwazi luhlanganiswa ngamashadi afomathiwe apholile akhombisa ukuqina kokukhanya ku-engeli ngayinye kude ne-0 ̊ lamp axis (nadir). Imininingwane yezinombolo iyatholakala nangefomu le-tabular.
Ama-footcandles: I-Illuminance, elinganiswa ngezinyawo (fc), yisilinganiso sobungako bokukhanya okufika ngaphezulu. Izici ezintathu ezithinta ukukhanyisa ukuqina kwesibani ekuqondeni kobuso, ibanga ukusuka ekukhanyeni kuya phezulu, ne-engeli yesibani sokukhanya okufikayo. Yize ukukhanya kungatholakali ngamehlo ethu, kuyindlela evamile esetshenziselwa ukucacisa imiklamo.
Ngicela uqapheleAma-footcandles yiyunithi ejwayelekile kakhulu yesilinganiso esetshenziswa ochwepheshe bokukhanyisa ukubala amazinga wokukhanya emabhizinisini nasezikhaleni ezingaphandle. Ikhandlela lezinyawo lichazwa njengokukhanyisa kusikwele sonyawo esisodwa ukusuka emthonjeni wokukhanya ofanayo. I-Illuminating Engineering Society (IES) incoma la mazinga alandelayo okukhanyisa namazinga wamakhandlela ezinyawo ukuqinisekisa ukukhanyisa okwanele nokuphepha kwabagibeli.
Amakhandlela / imitha: I-Luminance elinganiswa ngamakhandlela / imitha ubuningi bokukhanya okushiya ubuso. Yilokho iso elikubonayo. I-Luminance izokwembula okuningi ngekhwalithi nokunethezeka komklamo kunokukhanyisa kukodwa.
Isikhungo Samakhandlela Amandla (CBCP): Amandla kagesi we-Center beam amandla amakhulu akhanyayo enkabeni yesigxobo, avezwe kumakhandlela (cd).
Isigaxa Sokukhanya: Amathuluzi awusizo wokuqhathanisa ukukhanyisa okusheshayo nokubala, izigaxa zokukhanya zibala amazinga okuqala amakhandlela ezinyawo ngeyunithi eyodwa ngokuya ngamasu wokubala wephuzu. Ububanzi be-Beam buzungezelwa engxenyeni eseduze.
Ukukhanya okuphansi: Lezi zigaxa zokukhanya zihlinzeka ngokusebenza kweyunithi elilodwa ngaphandle kokubonisana okuvela ezindaweni. Imininingwane efakwe kuhlu eyokuphakama kokuphakama, amanani wamakhandlela ezinyawo ku-nadir, nobubanzi bomphumela obuholela.
Ukukhanyisa kwe-Accent: Amaphethini wokukhanya okuvela kwizikhanyiso eziguquguqukayo eziguquguqukayo ancike ohlotsheni lwesibani, i-wattage, ukuthambekela kwesibani nendawo yendiza ekhanyisiwe. Idatha yokusebenza kweyunithi elilodwa ihlinzekwa ngezindiza eziqondile nezime mpo, lapho isibani sitshekele ku-0 ̊, 30 ̊, noma ku-45 ̊ kuhloswe.
Beam Khanyisa Kuhloswe: Imishayo ekhanyayo ye-Beam ivumela umklami ukuthi akhethe kalula ibanga elifanele ukusuka odongeni ukuthola isibani futhi athole isigxobo sesibani sesibani lapho ufisa khona. Ngokukhanyisa izinto zobuciko odongeni, i-30 ̊ aiming iyathandwa. Kuleli engela, i-1/3 yobude besigxobo iyoba ngaphezu kwephoyinti le-CB, kuthi u-2/3 abe ngaphansi kwayo. Ngakho-ke, uma umdwebo ungamamitha amathathu ubude, hlela i-CB ukuthi ikhonjwe unyawo olungu-1 ngaphansi kwesihloko somdwebo. Ngokumodela okwandisiwe kwezinto ezintathu, kuvamise ukusetshenziswa amalambu amabili, ilambu lokhiye nokugcwalisa ukukhanya. Kokubili kuhloselwe okungenani ukuphakama okungama-30 and futhi kutholakala eksisi eyi-45 45 off.
Idatha Yokukhanyisa I-Wall Wash: Ukwabiwa kwe-asymmetric wash wash kunikezwa izinhlobo ezimbili zamashadi wokusebenza. Ishadi lokusebenza kweyunithi elilodwa lihlela amazinga okukhanyisa ekukhuphukeni konyawo olulodwa phansi nangaphansi kodonga. Amashadi wokusebenza kwamayunithi amaningi abika ukusebenza kwamayunithi aphakathi ahlanganisiwe kusuka kusakhiwo samayunithi amane. Amanani we-Illuminance ahlelwe phakathi nendawo yeyunithi futhi agxile phakathi kwamayunithi. 1. Amanani we-Illuminance amanani okuqala alungiswa yi-cosine. 2. Akukho okuphakathi kokuboniswa kwegumbi okufaka isandla kumanani okukhanyisa.3. Ukushintsha isikhala seyunithi kuzothinta izinga lokukhanyisa.
AMANDLA EQINISO LANDSCAPE LIGHTING PRODUCTS VARIES
Ukuqonda ukuthi ukukhanya kukalwa kahle futhi kuhlolisiswa kanjani kubalulekile njalo embonini yokukhanyisa umhlaba ongaphandle. Lapho sisebenzisa amalambu kumaphrojekthi amakhulu, kufanele futhi sihlele kude kakhulu futhi siqonde ukuthi sihlela kahle izinhlelo zethu zokukhanyisa ukusisiza sazi ngaphambi kwesikhathi, yimaphi amalambu esizowafaka kuphi, nokuthi mangaki esizowafaka emabangeni athile ukuze siwathole ukumbozwa kokukhanya okufanele. Kungakho eGarden Light LED izigqoko zethu ziya kumalebhu wokukhanyisa, onjiniyela be-IES kanye namazinga we-Intertek wezindawo zokukhanyisa amandla aphansi okuhlose ukuhlinzeka umkhakha wethu ngokufundwa kwangempela kwezilinganiso zokukhanya ezisezingeni eliphakeme futhi usinike imininingwane ochwepheshe abangayisebenzisa ukudala imiklamo yokukhanyisa esebenza kahle ngenkathi wenza izinqumo zokuthenga ngobuchule.
Uma uthenga amalambu we-landscape angaphandle, sihlala sincoma ukuthi ubhekele abanye abathengisi abaningi abazenza abakhiqizi abachaza ukukhanyisa okuphezulu ngezindleko eziphansi, ngoba esikhungweni sethu sokuhlolwa kwe-photometric, lezi ezinye izinto zokukhanya ezivela kwezinye izibani eziningi eziphansi ze-voltage landscape imikhiqizo e-USA nakwamanye amazwe, isilela kakhulu ekubalulweni kwayo okubikiwe namandla okufuna izimangalo zokukhishwa kokukhanya ngemikhiqizo yabo eshibhile engenisiwe.
Uma ufuna amalambu we-landscape amahle kakhulu lapho, siyakwamukela ukuthi uxhumane nathi futhi sizojabula ukubeka esinye sezibani zethu eziholwa ebangeni lobungcweti ezandleni zakho ukwenza ukuqhathanisa komhlaba wangempela!